Af soomaaliga iyo jaamacadda CAIRO warbixin buuxda | shumis.net
Home » bilicda somali » Af soomaaliga iyo jaamacadda CAIRO warbixin buuxda
Afkii hooyo ayaa jaamacadda ugu weyn dalka masar lagu bilaabay in lagu dhigo, afka Soomaaliga waxaa lagu dhigayaa muddo 5 sano ku dhowaad waxaa barta dadka masaarida ah,
afka hooyo haddii carabta ay bilaabeen inay bartaan waxay tilmaamaysaa inuu qiimo badan yahay, afka soomaaliga wuxuu noqday afka maanta jaamacadaha caalamiga lagu daraaseeyo,
waxaa ka dhiga jaamacadda qaahira afka soomaali pro. Mumin Yusuf Alim oo ka mid ah dadka wax ka bartay dalka masar wuxuuna bilaabay inuu af soomaaliga ka dhigo 2011.
maxay ka rabaan dadka carabta inay bartaan af soomaali?
afka soomaaliga wuxuu ka mid yahay afafka ugu xoogga badan bariga afrika waxaa ku hadasha ummad aan yarayn oo maanta ku nool dalal badan marka waxaa lagama maarmaan ah inay carabta ku dadaalaan afka soomaaliga maadaama shacabka soomaaliyeed uu yahay shacab muslin ah oo degan meel muhim ah oo istaraatiiji ah.
Buugaag ma soo baxeen oo laga baran karo afka carabiga?
Buug ayaa jira hadda oo af carabi iyo soomaali ah oo lagu dhigo jaamacadda qaahira buugaas wuxuu u qoran yahay qaab aad u sahlan, buugaas wuxuu ka mid yahay buugaagta ugu sahlan xagga barashada af soomnaaliga naxwe ayuu wataa iyo wada sheekaysi qiime badan siiba dadka carabta aad buu wax ugu tarayaa, si sahlanna way kaga baran karaan afka soomaaliga.
Dad carab ma jiraa oo si fiican u bartay
waxaa jirta gabar masaari ah hadda si fiican u baratay, waxay dhiganaysay muddo shan sano ku dhowaad hadda waxay ka diyaarinaysaa buug weyn oo ka hadlaya habka loo dhiso falka afka soomaaliga.
Xiriirka masar iyo soomaali iyo afka soomaaliga
masar iyo soomaali waxaa ka dhexeeya xiriir aad u ballaaran oo taariikhi ah, masar waxay ahayd waligeeda dowlad soomaali la safan xitaa markii ay soomaali la dagaalmaysay itoobiya, sidaas oo kale dowladda soomaaliya iyaduna waxay la safaneed dowladda masar markii ay yahuudda la dagaalamaysay, xitaa hilib ayaa laga dhoofin jiray soomaali.
Title: Af soomaaliga iyo jaamacadda CAIRO warbixin buuxda